Retirement Archives — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere mudyandigere
A nemudzimai ago I akashamisa vanhu vose nokuzivisa hachizi Album itsva, “simuka.” Hamunzwisisi zvakaoma sei zvakanga kunyarara pamberi pangu chitaridzi uye ndakaenda paruzhinji. Album akanga ari mabasa kwenguva inopfuura gore, uye ndakanga ndisingagoni kumirira kuudza munhu wose - kunyanya vaya vakaramba vachibvunza kana ndakanga kudonhedzera chinhu chitsva.
Mhinduro saka kure yave Zvinokurudzira chaizvo. Ndine kushamiswa kuti vanhu vakaramba anonditsigira kunyange zvazvo dzandakamboenda runako yakanyarara kuti okupedzisira maviri apfuura. rudo rwenyu uye mufaro kwave chete yakawedzera zvangu.
Chimwe mhinduro handina kushamisa kubudikidza yaiva uyu: "Chimbomira, Ndakafunga iwe pamudyandigere?"Uyu ndiwo mubvunzo kuti anonditevera kumativi somumvuri. Handina akataura nawo kubvunzurudza, Tweets, uye Blog namagwatidziro, asi ndinoziva kuti kuchiri kujeka kune vamwe. Regai kuramba kuedza kumisa zvinyorwa kururamisa: Handina basa.
mu 2012, Ndakazvizivisa ndingada kuti vave "achipindira kure mumhanzi." Hungu, Ndinoziva kuti zvinoita mudyandigere-ish, asi ini nemaune haana kushandisa shoko kuti. Ndakaramba naro nemaune kujeka nokuti handina 100% sure what it would…